How'd it happen and more reports?: စကာင်္ပူက အိမ်ခန်းဈေးရဲ့ လက်ရှိ အိမ်ခန်းပေါက်ဈေးတွေကို သင်သိချင်ရင်!
စကာင်္ပူက အိမ်ခန်းဈေးရဲ့ လက်ရှိ အိမ်ခန်းပေါက်ဈေးတွေကို သင်သိချင်ရင်!
စကာင်္ပူက လက်ရှိအိမ်ခန်းပေါက်ဈေးတွေကိုကြည့်လို့ရတဲ့ Website လေးဖြစ်ပါတယ်.. အခန်းအဌားရော၊ အရောင်းပါကြည့်လို့ရပါတယ်၊ တခြား ရုံးခန်းတွေ၊ အရောင်းဆိုင်လေး တွေနှင့်Shophouseလေးတွေရဲ့လက်ရှိဈေးနှုန်းလေးတွေပါကြည့်လို့ရပါတယ်၊
အမြတ်ရာခိုင်နှုန်း ၄ % လောက် ပုံမှန် ရနေတာကြောင့်လဲ၊ ဘဏ်အတိုးနှုန်းတွေထက် ပိုကိုက်တာနေတာ ကြောင့်လဲ ဒီစကာင်္ပူက အိမ်ခြံမြေတွေမှာ နိုင်ငံတကာကလာရောက် ရင်းနှီးမြှမ်နှံတာတွေ တဖြေးဖြေး များလာလို့လဲ ဈေးတက်သွားရတာပါ၊ နောက်ပြီး ၀င်ငွေကောင်းတဲ့ PR သမားတွေကို ဥပဒေစည်းမျဉ်း လေးတွေ တဖြေးဖြေးတင်းကြပ် လာတာပါ၊ ၀င်ငွေမကောင်းတဲ့ကျတဲ့ စကာင်္ပူတွေ အတော်များများက အိမ်မ၀ယ်နိုင်ကျတော့ဘဲနှင့် ပင်ရင်းအိမ်ရှင်ကနေ အိမ်ဌားတွေ ဖြစ်မှန်းမသိရောက်ရှိလာရပါတော့တယ်၊ ဒါတွေကြောင့်လဲ ဒီက ပင်ရင်း စကာင်္ပူတွေ အော်လွန်းမကအော်နေတော့တာပါဘဲ၊
တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ HDB အိမ်ခန်းဌားခ တက်လာလဲ ကြောက်ဖို့ကောင်းလောက်တယ် တနှစ်ကို ဒေါ်လာ၅၀လောက်နှုန်းကို တက်နေတာလေ၊ ၂၀၀၅ခုနှစ်တုန်းက အိမ်းခန်းတခန်းမှာ ဒေါ်လာ၃၀၀၊ ၃၅၀လောက်ဘဲပေးရတာ အခု ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်လာ ၇၀၀ - ၈၀၀လောက် ကိုတောင်းနေပြီလေ၊ ဒီမှာအလုပ်လခနှစ်တိုးတက်တာက တနှစ်မှာ ၅% - ၇%နှုန်းလောက်ဘဲ တက်တာ ဆိုတော့ တွက်တာကြည့်လိုက်တော့...
ဒါကြောင့် ဒီမှာ အလုပ်မရှိလို့ကိုမရပါဘူး၊ ၀င်ငွေမရှိလျှင် ဘာနှင့်သွားစားမှာလဲ? သင်ကိုဘယ်သူမှ ရေရှည် ကြွေးမထားနိုင်ကျပါဘူးလေ! အရွယ်ရောက်သူတိုင်း GCE 'O' ဖြေပြီးသူတိုင်း
အလုပ်ထဲ၀၀င်နေရပါပြီလေ... အချိန်ပိုင်း တစ်နာရီလုပ်ခ ကျောင်းသားလေးတွေကို ဒေါ်လာ ၇ + အပိုဆုကြေး + ကော်မရှင်လေးတွေ ပေးတတ်ပါတယ်၊ အများအားဖြင့် အရောင်းစာရေးလေးတွေ၊ စားသောက်ဆိုင် စားပွဲထိုးတွေ ဒီလောက်နှုန်းရတတ်ပါတယ်၊ ရတာနည်းတတ်တဲ့ ဒေါ်လာ၅ ရတတ်တဲ့ အပင်ပန်းဆုံးက စက်ရုံက အလုပ်ကြမ်းသမားတွေထိ ၀င်လုပ်တတ်ပါတယ်၊
နောက်တခု သတိပေးချင်တာက ဒီက စကာင်္ပူတွေ လစာနည်းပါတယ် ITE ကျောင်းဆင်းတွေဆို ဒေါ်လ ၁၂၀၀ လောက်ပါဘဲ ၊ ဒီက Poly ကျောင်းဆင်းသမားတွေ ကတော့ ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ လောက်ဘဲ စပေးတတ်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားတွေကို SP ရဖို့ ဒေါ်လာ ၂၂၀၀ ပေးတော့မှာလဲနော်...
Admin စာရေးဆိုတဲ့ မိန်းခလေးတွေကိုတော့ ဒေါ်လာ ၁၆၀၀လောက်ဘဲရတာဗျ... အကောင့်စာရင်းတွေပါကိုင်ရတာနော်...
ဒီကဘွဲ့ရတဲ့ သူတွေကိုမှ ဒေါ်လာ ၂၅၀၀လောက်ကနေ စပေးတတ်ကျတယ်လေ၊ တချို့ကတော့ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ကျော်လောက်ရတတ်ပါတယ်...ဒါကြောင့် ဘယ်သူတွေဘဲ အိမ်ဝယ်နိုင်ကျလဲ သိပြီလား ?
အလုပ်ရှိပြီး နှစ်အတော်ကြာအလုပ်လုပ်ပြီးရင် လစာကောင်းရင် သမီးရည်းစားတွေ လက်ထပ်ရင် ၂ယောက်ပေါင်းလစာ ကောင်းရင် အစိုးရဆီက စကာင်္ပူတွေဆိုရင် တန်ဖိုးနည်း HDB အိမ်အသစ်ဝယ်လို့ရပါပြီ၊ အချိန် ၂- ၃နှစ်လောက်တော့ စောင့်ရပမယ်၊ PR တွေဆိုရင်တော့ တဆင့်ပြန်ရောင်းတဲ့ HDB အိမ်တွေကို ၀ယ်လို့ရပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အိမ်ခန်းစရန်ချဖို့တော့ မိမိရဲ့ CPF ထဲမှာ ငွေသား ၃သောင်းကနေ ၆သောင်းလောက်တော့ရှိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နော်...သင့်ရဲ့ဝင်ငွေ အပေါ်ကြည့်ပြီး အိမ်ခန်း ဘယ်နှစ်ခန်းပါရမလဲ သုတို့တွက်ကြည့် ပေးပါလိမ်မယ်၊ ကျန်တာတွေကို စကာင်္ပူတွေဆိုရင် HDB က နှစ် ၂၀- ၃၀ အချိန်ကြာငွေချေးပေးပါလိမ့်မယ်၊ PR ဆိုရင်တော့ ဘဏ်ကနေငွေချေးပေးပါလိမ့်မယ်၊
ဒါမျိုးလေးတွေကြောင့်လဲ အမိမြေက ရွှေတွေ ဒီစကာင်္ပူကို ကြိုက်နေကျတာပေါ့ဗျ... အမိမြေမှာဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ၀န်ထမ်းတွေ အိမ်ဝယ်နိုင်မှာလဲနော် ? ဒီမှာက အလုပ်ရှိဖို့ဘဲလိုပါတယ်.....နောက်ပြီး အလုပ်က သက်သာဖို့လဲလိုပါသေးတယ်နော် ! ဒါမှလဲ အလုပ်တခုမှာ ကြာကြာမြဲမှာပေါ့ဗျ...ဟုတ်ဘူးလား!
တချို့ရွှေတွေဆိုရင် ဒီမှာအိမ်တွေဝယ်ပြီးလို့ ပြန်ဌားစားပြီး ရတဲ့အိမ်လခ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ကျော်လောက် နှင့် အမိမြေပြန်နေတာ အေးအေးဆေးဆေးဒူးနှံနေယုံဘဲဗျ...
အကယ်၍ သင်စိတ်ဝင်စားရင် iphone application လေးလဲ ရှိပါတယ်. ဒေါင်းလုဒ်လို့လဲရပါတယ်!
#1 Property Research Website in Singapore. Click to seeatrending property => http://bit.ly/Zc0iAS
Without borrowingadollar, what can you buy with $200k cash? Turns outaterrace house with 7-year remaining lease for only $168k! Equivalent to payingamonthly rent of $2k, cheaper than rentinga4-room flat in the vicinity! There was also an office unit sold for less than $200k in District 3! Want to know more about our Shortlist? Sign up for our upcoming traininghttp://bit.ly/M3ivB8 Photo: Google Maps
LATEST RENTAL TRANSACTIONS
HDB Town All Ang Mo Kio Bedok Bishan Bukit Batok Bukit Merah Bukit Panjang Bukit Timah Central Area Choa Chu Kang Clementi Geylang Hougang Jurong East Jurong West Kallang/Whampoa Marine Parade Pasir Ris Punggol Queenstown Sembawang Sengkang Serangoon Tampines Toa Payoh Woodlands Yishun
Note: Transactions in the last2months
DEC 2014 SENGKANG BLK 101 RIVERVALE WALK 4-ROOM 101 20.8 2,100
DEC 2014 BUKIT BATOK BLK 102 BUKIT BATOK WEST AVENUE64-ROOM 108 16.7 1,800
DEC 2014 BUKIT MERAH BLK 102 HENDERSON CRESCENT 4-ROOM 80 25.0 2,000
DEC 2014 TAMPINES BLK 102 SIMEI STREET 1 4-ROOM 104 24.0 2,500
DEC 2014 PUNGGOL BLK 102D PUNGGOL FIELD 4-ROOM 90 23.3 2,100
DEC 2014 BUKIT MERAH BLK 103A DEPOT ROAD 4-ROOM 95 26.8 2,550
DEC 2014 GEYLANG BLK 104 ALJUNIED CRESCENT 4-ROOM 92 26.1 2,400
DEC 2014 PASIR RIS BLK 104 PASIR RIS STREET 12 4-ROOM 105 20.0 2,100
DEC 2014 WOODLANDS BLK 104 WOODLANDS STREET 13 4-ROOM 92 22.8 2,100
DEC 2014 PUNGGOL BLK 104A EDGEFIELD PLAINS 4-ROOM 90 22.2 2,000
DEC 2014 JURONG EAST BLK 105 JURONG EAST STREET 13 4-ROOM 93 28.0 2,600
DEC 2014 PUNGGOL BLK 105C EDGEFIELD PLAINS 4-ROOM 90 24.4 2,200
DEC 2014 BUKIT BATOK BLK 106 BUKIT BATOK CENTRAL 4-ROOM 105 18.6 1,950
DEC 2014 BUKIT MERAH BLK 106 HENDERSON CRESCENT 4-ROOM 81 34.6 2,800
DEC 2014 ANG MO KIO BLK 107 ANG MO KIO AVENUE44-ROOM 96 27.1 2,600
DEC 2014 BUKIT BATOK BLK 108 BUKIT BATOK WEST AVENUE64-ROOM 105 22.9 2,400
DEC 2014 JURONG EAST BLK 108 JURONG EAST STREET 13 4-ROOM 92 26.1 2,400
DEC 2014 TAMPINES BLK 108 TAMPINES STREET 11 4-ROOM 105 18.1 1,900
DEC 2014 BISHAN BLK 112 BISHAN STREET 12 4-ROOM 90 29.4 2,650
DEC 2014 BUKIT BATOK BLK 112 BUKIT BATOK WEST AVENUE64-ROOM 105 24.8 2,600
17 DEC 2014 WOODLANDS BLK 750 WOODLANDS AVENUE4XX TO XX 5-ROOM IMPROVED 99 YRS FROM 1998 122 3,488 425,000
17 DEC 2014 SEMBAWANG BLK 504C CANBERRA LINK XX TO XX 5-ROOM IMPROVED 99 YRS FROM 2001 110 3,864 425,000
17 DEC 2014 YISHUN BLK 819 YISHUN STREET 81 XX TO XX 5-ROOM IMPROVED 99 YRS FROM 1987 127 3,940 500,000
17 DEC 2014 PUNGGOL BLK 117 EDGEFIELD PLAINS XX TO XX 5-ROOM PREMIUM APARTMENT 99 YRS FROM 2003 112 3,886 435,000
16 DEC 2014 BUKIT MERAH BLK 117 BUKIT MERAH CENTRAL XX TO XX 5-ROOM IMPROVED 99 YRS FROM 1977 117 5,554 650,000
16 DEC 2014 BEDOK BLK 666 JALAN DAMAI XX TO XX 5-ROOM IMPROVED 99 YRS FROM 1996 125 4,887 610,000
16 DEC 2014 TAMPINES BLK 453 TAMPINES STREET 42 XX TO XX 5-ROOM IMPROVED 99 YRS FROM 1987 122 4,252 518,000
16 DEC 2014 HOUGANG BLK 552 HOUGANG STREET 51 XX TO XX 5-ROOM IMPROVED 99 YRS FROM 1990 121 3,929 475,000
16 DEC 2014 HOUGANG BLK 971 HOUGANG STREET 91 XX TO XX 5-ROOM IMPROVED 99 YRS FROM 1999 116 4,230 490,000
16 DEC 2014 SENGKANG BLK 291D COMPASSVALE STREET XX TO XX 5-ROOM IMPROVED 99 YRS FROM 2001 110 4,316 475,000
16 DEC 2014 ANG MO KIO BLK 552 ANG MO KIO AVENUE 10 XX TO XX 5-ROOM IMPROVED 99 YRS FROM 1980 119 5,167 615,000
16 DEC 2014 JURONG WEST BLK 833 JURONG WEST STREET 81 XX TO XX 5-ROOM IMPROVED 99 YRS FROM 1993 127 3,423 435,000
16 DEC 2014 JURONG WEST BLK 662D JURONG WEST STREET 64 XX TO XX 5-ROOM IMPROVED 99 YRS FROM 2001 110 4,758 523,000
16 DEC 2014 JURONG WEST BLK 989D JURONG WEST STREET 93 XX TO XX 5-ROOM PREMIUM APARTMENT 99 YRS FROM 2008 110 4,650 512,000
16 DEC 2014 BUKIT BATOK BLK 390 BUKIT BATOK WEST AVENUE5XX TO XX 5-ROOM IMPROVED 99 YRS FROM 2004 118 5,167 610,000
16 DEC 2014 BUKIT BATOK BLK 288E BUKIT BATOK STREET 25 XX TO XX 5-ROOM IMPROVED 99 YRS FROM 1998 123 4,392 540,000
16 DEC 2014 BUKIT PANJANG BLK 211 PETIR ROAD XX TO XX 5-ROOM IMPROVED 99 YRS FROM 1988 122 4,144 505,000
16 DEC 2014 BUKIT PANJANG BLK 476 SEGAR ROAD XX TO XX 5-ROOM PREMIUM APARTMENT 99 YRS FROM 2002 111 3,649 405,000
16 DEC 2014 CHOA CHU KANG BLK 502 CHOA CHU KANG STREET 51 XX TO XX 5-ROOM MODEL A 99 YRS FROM 1995 132 3,563 470,000
16 DEC 2014 CHOA CHU KANG BLK 517 CHOA CHU KANG STREET 51 XX TO XX 5-ROOM IMPROVED 99 YRS FROM 1995 121 3,477 420,888
Market performance aside, here’sabird-eye view on sites offered in 1H15 GLS Programme, where the future launches will be.
Here'saquick update on major projects launching soon!
The best of the best in the HDB market
Here'sathrowback on 3Q14 HDB median resale prices and rents by town and room-type (credit to HDB). Which town would you choose?
Though owners may feel the pinch, prospective buyers eyeing on the HDB resale market are in foratreat as prices plunged by over 10% since May 2013 toacurrent4year-low (Check out the graph!). It's your market, buyers!
Eyeing on the resale market? Here'saquick update on the price correction in the secondary market. Opportunities might be lurking in the central region....
With quick profits off the radar, buyers may want to look beyond capital gain. Find out where you can get rental yields above 4%.
These sellers made gross profits of $100k - $2.4m in underayear.
Like our charts? You may now save it directly off the website! Look out for the export icon next to any chart, click and save to your preferred format!
HDB flats changing hands above $900k in 2014
Posted by Ko Nge at Wednesday, December 17, 2014